TSR-ALERT « MMWeather Information BLOG
မုန်တိုင်း MAHASEN နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်မည်
Leaveacomment TSR-ALERT, မုန်တိုင်းသတင်း 01B, MAHASEN, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် TSR မှ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်နိုင်ခြေသတိပေးချက်တွင် စစ်တွေမြို့ ပါဝင်လာ
By mmweather.ygn, on May 12th, 2013%
မေလ ၁၂ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲမှ နောက် ၉၆ နာရီ(မေလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ နောက်ပိုင်း)တွင် အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MAHASEN ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရနိုင်မည့် နိုင်ငံ (၃)နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ်တွေမြို့ ပါဝင်လာကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
(TSR မှ YELLOW ALERT ဆိုသည်မှာ တစ်နာရီ ၇၄ မိုင်နှုန်းဖြင့် ၁ မိနစ် ဆက်တိုက် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရနိုင်မည့် အခြေအနေ ၁ဝ% ရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်)
N Indian Ocean: Storm Alert issued at 12 May, 2013 12:00 . . . → Read More: TSR မှ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်နိုင်ခြေသတိပေးချက်တွင် စစ်တွေမြို့ ပါဝင်လာ
Leaveacomment TSR-ALERT 01B, MAHASEN, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ မုန်တိုင်း NILAM(02B) update
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် ချင်းနိုင်(Chennai)မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၁၀ ခန့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့တော် အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၂၇၀ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၇ိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း၊ မူလ ခန့်မှန်းထားသည့်လမ်းကြောင်းမှ တောင်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံတွင် ကြည့်ပါ)
02B NILAM 31 Oct 2012 0000Z Location: 10.3 81.8 Winds: 50 knots Central Pressure: 985 hPa
TROPICAL CYCLONE (TC) 02B, LOCATED APPROXIMATELY 225 NM SOUTHEAST OF . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှ မုန်တိုင်း NILAM(02B) update
Leaveacomment TSR-ALERT, မုန်တိုင်းသတင်း TSR မှ ဗီယက်နန်၊ လာအို၊ တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများသို့ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်
Leaveacomment TSR-ALERT, မုန်တိုင်းသတင်း 24W, SON-TINH Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum